ဗျာဒိတ်ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူး | Apg29
ကျွန်တော်တို့ကိုကွောကျရှံ့ Inspiration ကျွန်တော်တို့ကိုအစားအစာ, အဝတ်အထည်နှင့်စိုးရိမ်မှုတွေထိပ်ပေါ်မှာကြောင်းငှားဆပ်ဖို့မတတျနိုငျမဝယ်နိုင်မယ့်အလုပ်နှင့်အရှင်မရကင်းလွတ်စေခြင်းငှါ, နေမကောင်း-ကျန်းမာရေးမကြာခဏအမည်ရှိပေမယ့်မရနိုင်သည်ကိုဘာမှ။
တစ်ဦးကလယ်သမားကသူ၏နောက်ကျောအပေါ်ကြီးမားတဲ့မိုးသည်းထန်စွာအိတ်နှင့်အတူကြိတ်ကနေသွား၏။ တစ်ဦးကမြင်း လာ. , ယာဉ်မောင်းသွားရရန်လယ်သမားပူဇော်ကြ၏။ အဆိုပါလယ်သမားကသူသွားရတယ်ကသူ့နောက်ကျောပျော်ရွှင်ပေါ်တွင်အိတ်နှင့်အတူထိုင်တော်မူ၏။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းကမေးတယ်:
ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့် fixed ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တော်၌ထို starved မြွေမှာခြေဆွံ့သောသူကိုစိုက်ကြည့်ပြန်ယင်း၏သားကောင် hypnotizes အခါအနာဂတ်အစားထိုးခံစားရနိုင်သည်ကိုနားလည်ရုံကြောင့်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူချွတ်အလျင်စလိုသို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်ကျွန်တော်တို့ကို တင်. ကြှနျုပျတို့ပွုနှင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုပိုပြီးဒုက္ခမပေးသင့်တယ်ဘာလုပ်ကျနော်တို့ဒါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုကွောကျရှံ့ Inspiration ကျွန်တော်တို့ကိုအစားအစာ, အဝတ်အထည်နှင့်စိုးရိမ်မှုတွေထိပ်ပေါ်မှာကြောင်းငှားဆပ်ဖို့မတတျနိုငျမဝယ်နိုင်မယ့်အလုပ်နှင့်အရှင်မရကင်းလွတ်စေခြင်းငှါ, နေမကောင်း-ကျန်းမာရေးမကြာခဏအမည်ရှိပေမယ့်မရနိုင်သည်ကိုဘာမှ။ ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံမပါဘဲဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျပိုက်ဆံအများအပြားစိုးရိမ်မှုတွေကွာလိုက်နိုင်ပေမယ်အလွယ်တကူဖြစ်တည်မှု၏နည်းနည်းလေးလေပြင်းတိုက်ခြင်းနှင့်အတူကွယ်ပျောက်မှုတ်အဖြစ်ကမြင့်တက်လုံခြုံရေးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်း၏ကောင်းသောအလုံအလောက်မချစ်မကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အစဉ်အမြဲထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်။ မိဘများသည်မိမိတို့၏သားသမီးများရဲ့အနာဂတျအတှကျစိုးရိမ်နေကြသည်။ ကလေးများကျောင်းသို့သွား၏ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌နေထိုင်ကြသည်။ မကျြနှာကိုနားမလည်နှင့်အနိုင်ကျင့်ခံရ။ ယရှေုသညျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကြောင်းကိုသိတယ်တိကျစွာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျနော်တို့အစားအစာ, အဝတ်အစား, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအကြောင်းကိုမစိုးရိမ်သင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုကပြောပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမတစ်ချိန်တည်းမှာသခင်နှစ်ဦးအစေခံနိုင်ပါတယ်။ (လုကာ 6:24) ထို့ကြောင့်နှစ်ဖက်ကိုရှေးခယျြရမညျနညျး ဟုတ်ကဲ့, ယရှေုသရှင်းလင်း။ သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုအစေခံရန်ကြိုးစားပါကတဦးတည်း "သူဌေးက" စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်အခြားခစျြလိမျ့မညျ။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအလယ်မြေပြင်ရှိသေး၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့လုပ်ဖို့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူကဘာလဲ? ဤတွင်ယရှေုသညျကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ရှင်းပြချက်ကိုပေးသည်။
"သင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အစေကို၎င်းလို့မရပါဘူး။ (= ငွေနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု), သငျနှငျ့အတူသငျသညျကိုဝတ်လိမ့်မယ်ဘာသငျသညျအစာကိုစားလတံ့သောအရာကို, သင့်အသက်တာကိုစိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်သောက်ဘူး, မသင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကို။ "
သူကငှက်ဖြစ်တည်မှု carefree ပြန်ပြောပြသည်။ ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဂရုစိုကျနှင့်ငါတို့သည်သူ့ကိုအကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျဖွစျဖို့ခွင့်ပြုကျနော်တို့သူငါတို့အဘတည်းဟူသောကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများအရလိမ့်မည်သည့်အခါ။ "သင်၏အဘသည်သင်တို့အားဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို, ပထမသူ့နိုငျငံတျောသညျနှင့်သူ၏ဖြောင့်မတ်ရှာအံ့သောငှါ (ဒီမှာဂတိတော်ကိုလာ) နှင့်သင်တို့ရှိသမျှအရာကြွင်းလေဖြစ်လိမ့်မည်လိုသိပါတယ်။ သင့်ရဲ့အထူး "အိတ်" "လှည်း" ပေါ်တွင်တင်နှင့်သင်ဂရုစိုက်နှင့်သင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဖြစ်စေအလိုငှါဘုရားသခင်၏ကတိတော်အပေါ်ကိုသွားပါ။
ပေါလုသညျသူနှစ်ဦးစလုံးဆာလောင်မွတ်သိပ်ခဲ့ရခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်ရိုက်နှက်ခဲ့တစ်ခါတစ်ရံမိုဃ်းတိမ်မှထမြောက်တော်မူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ခဲ့ပြီးမည်မျှကိုပြောပြသည့်အခါသူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်ကိုကြောက်ရွံ့အကောင်းဆုံးရောဂါပျောက်ကင်း, ချစ်ပြီးမုန်းကြခြင်းနှင့်သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများအောက်တွင်နေထိုင်နေကြ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဘဝအခြေအနေအားလုံးအတွက်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်း၏တော်မူ၏။
ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ရှိ၏ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရန်။ ဒါဟာတွှေပျံသန်းဖို့ကြောက်ရွံအစုံက "တံခါးဝ၌ခြေမ" နှင့်ကျူးကျော်ဖို့ကြိုးစားပြီးကျူးကျော်ကိုကွောကျရှံ့သညျ့အခါငါတို့အသက်၏ညာဘက်မာစတာရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီပေး။